Careys Karshe - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Careys Ciise Karshe)
Fadlan Waxba haka qorin sida: Reeraha ama Qabiilada hoose ama Jilibyada iyo wixii la hal maala.
Sababtoo ah Wikipedia Maaha meel lagu amaano ama lagu dacaayadeeyo Qabiilka. Fadlan aqri Qodobada raacsan wax kasii ogaanshaha wikipedia. Fadlan isku day inaad qortid wax nuxurleh oo la fahmi karo.
Waad ku mahadsantahay isfahanka.
Careys Ciise Karshe wuxuu ah nin ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku caanka baxay gabayayada, geeraarka iyo Saarka. Careys wuxuu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb, Gobolka Galguduud.
3 Qaar ka mida Gabayada
Careys Kaarshe oo ahaa saaryahan weyn oo Soomaaliyeed wuxuu Ku dhashay tuulo u dhaw kismaayo careeys wuxuu ahaa geesi buuxa oo waliba gobanimadu kala weyntahay waxkastoo yaala guudka dunida. Sida la wariyay Careys wuxuu ahaa Wiilkii seddaxaad oo uu dhalay Ciise Kaarshe,
Careys Ciise Af-maal nimada ka sakow wuxuu ahaa nin Wadani ah oo mar kasta jecel bulshaweynta Soomaaliyeed in uu waajibka saaran ee Qaranimo ku booriyo, ugana digo wax kasta oo uu isleeyahay waa qalad. Careys Ciise wuxuu Fanaaniinta Waabari ku soo biiray amaba ka mid noqday lixdameeyadii markii labada gobol ee Soomaaliyeed Midoobeen. Careys wuxuu ka mid noqday Kooxda Waabari markii uu wacdaro layaab leh ee Suugaaneed uu ka muujiyay Munaasibaad lagu xusayay isku darkii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur, Xafladaasoo lagu Maamusayey israaca Labada Gobol laguna qabtay Gobolka Jubbada Hoose Magaalada Kismaayo. Xafladaas waxaa ka soo qeeb galay Wariirka Gaashaandhiga iyo Wasiirka Warfaafinta, Ujeeddada waftigana waxay ahayd inay kala qayb galaan dadweynaha ku nool Gobolka Jubbada Hoose, fantasiyaha damaashaadka maalinta kowda Luuliyo. Waftigii waxaana ka qeeyb ahaa suugaan-yahanadii madasha ka hadlay Careys Ciise iyo koox dumar ah oo isaga wehelisay, watana dharkii Hiddaha iyo dhaqanka aanu u lahayn. Careys Ciise fagaarahaas wacdaro aan la soo koobi kareyn ayuu ka muujiyay, wuxuuna tiriyay saar ku saabsan Munaasibada kowda Luuliyo. Waxaa kale oo uu halkaa ka tiriyay Saar ku saabsan waxa uu Ingiriisku u hortaagan yahay xornimada N.F.D. wuxuuna yiri sidatan:
Iyo orobaba dhammaan
Suugaanta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qaar ka mida Gabayada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waa taariikh aad u fiican in wax laga ogaado ee fadlan haddii aad jeceshahay inaad wax ku darted raaci bogga hoose si aan wax uga ogaano ku darniinkaada.
Saarka Hooyadu waa lama huraan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Careys_Karshe&oldid=213692"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Luuliyo 2021, marka ee eheed 00:20.